Bokotra hoe CTRL + D sy CTRL + V eo amin' ny Varavarankely sy ny Linux VM ao anaty Baoritra Nolalaoviko – Taylor Lopes ツ Blog
Bokotra hoe CTRL + D sy CTRL + V eo amin' ny Varavarankely sy ny Linux VM ao anaty Baoritra Nolalaoviko
Fomba tahadika/apetaho eo amin' ny Varavarankely sy virtualized Ordinateur Debian? Ny vahaolana miharihary fa ho napetaky ny “Ho an' ny Vahiny fanampiny” Oracle VM VirtualBox, kanefa rehefa mamorona ny fahadisoana “Tsy nahomby ny hametraka vboxadd ny asa fanompoana”?
Voalohany indrindra, Manamafy aho fa nampiharina tamin'ireto tontolo manaraka ireto io vahaolana io.:
– Oracle VM VirtualBox miaraka amin'i Debian 9 Netinst virtoaly
Ny olana dia tsy azo natao ny nandika sy nametraka ny sary teo amin'ny Windows sy Linux (virtoaly). Rehefa manao ny CTRL+C sy CTRL+V, tsy nisy na inona na inona.
Nilaza ny vahaolana natolotra tao amin'ny sehatra fifanakalozan-kevitra amin'ny aterineto fa mba hamahana ity olana ity dia ampy hametrahana ny fonosana “Ho an' ny Vahiny fanampiny” Izay tonga ao amin'ny Oracle VM VirtualBox, Fa rehefa niezaka nanao izany aho., niteraka ity tsy fetezana manaraka ity:
"Failed to set up service vboxadd, Jereo azafady ilay raki-tatitra"
Rehefa nampiasa ny Netinst (Dika miankina amin'ny Debian), Mety hoe tsy hita ny rindrambako sasany takiana rehefa mandeha. “Ho an' ny Vahiny fanampiny”.
Fametrahana fonosana fanampiny.:
Apt-ataovy tsara ny fanavaozana-Ampifanaraho amin'ny gcc ny gcc-mametraka linux-Loham-pejy-$(Tsy mety -R)
Ity baiko farany ity dia ny famerenana ny Linux.
Fametrahana ny “Ho an' ny Vahiny fanampiny”:
// DINGANA 1
On Oracle VM VirtualBox, Ho any amin'ny toloeran'ny fitaovana > Hampiditra sary misy CD an'ny mpampiano vahiny
// DINGANA 2
Tsindrio in-droa ilay VBOXADDTIONS_5.1.24_117012 (na amin'ny endriny hafa) Izay hiseho eo amin'ny sehatr'aretina.
// DINGANA 3
Manokatra ilay terminal, Hiditra amin'ny sori-dàlana mankany amin'ny VBoxLinuxAdditions, Raha ny tokony ho izy dia ity.:
Cd /Haino aman-jery/cdrom0/
// DINGANA 4 - Installation!
sudo sh ./VBoxLinuxAdditions*.alefaso
// DINGANA 1 On Oracle VM VirtualBox, Ho any amin'ny toloeran'ny fitaovana > Hampiditra sary misy CD an'ny mpampiano vahiny // DINGANA 2 Tsindrio in-droa ny VBOXADDTIONS_5.1.24_117012 (na amin'ny endriny hafa) Izay hiseho eo amin'ny sehatr'aretina. // DINGANA 3 Manokatra ilay terminal, Hiditra amin'ny sori-dàlana mankany amin'ny VBoxLinuxAdditions, Raha ny tokony ho izy dia ity.: cd /media/cdrom0/ // DINGANA 4 - Installation! sudo sh ./VBoxLinuxAdditions*.run
rehefa afaka izany,, Aza adino ny manome fahafahana miditra amin'ny vmbox ireo safidy ahafahana mandika sy manondraka. (fanindri-taratasy / bi-directional), Araka ny aseho eto ambany:
Avereno alefa ny Linux ary ataovy ilay fitsapam-pahaizana!
Total isan'ny Hits: 56553
28 Jolay 2017 Taylor Lopes	vahiny fanampiny, ctrl+c, ctrl+v, gcc, Vboxadd, vboxlinuxadditions, efajoro virtoaly, vm, Windows
9 hevitra “Bokotra hoe CTRL + D sy CTRL + V eo amin' ny Varavarankely sy ny Linux VM ao anaty Baoritra Nolalaoviko”
Gabriela nanao hoe::
9 Oktobra 2018 ny 17:22
Inona no Zit Tooya nanao hoe::
Niasa toy ny ody. Misaotra betsaka anao
4 Desambra 2018 ny 21:39
Renato nanao hoe::
Parabens vahana ny olana anananao aho.
3 Jolay 2019 ny 13:00
Silvio nanao hoe::
Noho ny Fanampiana, nanampy betsaka
31 Janoary 2020 ny 8:44
Gabriela dos Reis Silva nanao hoe::
Soooi fa tsy manomboka intsony ny milina nataoko taorian' ny nanomezany ity didy farany ity..
Restarted, kanefa rehefa mampiditra ny mpampiasa sy ny tenimiafina aho mba hidirana ny pops amin' ny efijery mainty. (toy ireny hoe ho tonga amin' ny) ary miverina amin'ny efijery iray ihany mba hidirana ao amin'ny mpampiasa sy ny tenimiafina
4 Aprily 2020 ny 13:26
Milina inona, the Debian VM? Manandrana ny Ctrl + Alt + F1, tafiditra ao anatin' ny faka. Hamarino ny permissions na ny tahirin-mpiasan' ny si tompon': ls-la/home/User. Jereo raha toa ka raha ny marina dia iza ny MPAMPIASA, Raha tsy izany, Miezaka: sudo ny chown ny Mpampiasa:USUARIO /home/USUARIO. Hanova ny anaran'ny mpampiasa izay ezahanao hidirana.
30 Aprily 2020 ny 23:22
William Gasperi,  nanao hoe::
Manahoana, avy eo dia atsangano ny ampahany amin' ny fanasana azy ireo mba ho eny amin' ny kisary., satria manao izany aho ho an' ny asio sary nataon' ( Ny hoe didy dia).
Nataoko tao ilay izy., ary tsy afaka, niezaka ny hiditra tamin' ny fandidiana aho saingy tsy afaka mahazo izany., Milaza fa tsy afaka manokatra ilay rakitra ianao.
Na inona na inona safidy?
20 mey 2020 ny 13:52
Whellington, Taona Vaovao nanao hoe::
Tooop ilay namako, nanampy ahy ho ahy ny o/
27 Jolay 2020 ny 22:37
Leonard Montero nanao hoe::
Tena tsara! Misaotra betsaka anao!
31 Aogositra 2020 ny 11:17
Ahoana no ahazoana ny fanamarinana PHP Zend-nao Tantara fohy sy tsotsotra mikasika ny fomba nahafahako nahazo ny injenieran'ny PHP voamarina PHP – ZCPE. Introdução A ideia não é falar sobre as vantagens (na tsia) manana fanamarinana. Te-hizara ny zavatra niainako fotsiny aho., izay mety hanampy...
amin'ny Izany dia Blaogy ny Fampahalalana Mikasika ny Teknôlôjia sy ny Teknôlôjia. Ny hevitra dia ny hizara fahalalana ara-teknika sy manoratra olana sy vahaolana izay mipoitra isan' andro., ho loharanon' ny firesahana amin' ireo izay mila, incluindo eu ツ Contato...
Copyright © 2022 taylorlopes.com satria Oct 2012, 3.110.709 fidirana